Best Movies Featuring Uqeqesha | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iingcebiso zokuhamba > Best Movies Featuring Uqeqesha
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 11/12/2020)
Yintoni eya usinga ukuba uthathe uhambo ngololiwe ngaphezu ukubukela i Movies umdla Featuring Uqeqesha? Thatha ujongo kwi kuluhlu lwethu Movie best Featuring Uqeqesha, kwaye tweet nathi apha @saveatrain nisixelele ukuba zeziphi enizibonileyo ukuba wayebathanda kangangoko njengoko enza.
Emantloko Pick yethu Movies Featuring Uqeqesha yi – Harry uMbumbi Movies 1 ukuba 8 (2001-2011)
Ngokusekelwe uthotho edume iincwadi yi J.K. Rowling, ezi Movies asibhozo Featuring oololiwe iveza njengephupha omlingo malunga wizard entsha, uharry Potter. Yena ufunda anazo amandla omlingo kwaye uyasihamba Hogwarts School of ebugqwirheni phela, apho ukuba ngaba ubomi obutsha bazaliswe yindyebo imingeni, villains, kunye nempumelelo.
Kodwa phi na oololiwe angene? Ngosuku Harry lokuqala esikolweni, anayo ukuba bakhwele Hogwarts Express, uloliwe akhiwe kwiqonga 9 ⅓. Yinto kuphela zifikeleleke ngokusebenzisa – fast- towards udonga lwezitena phakathi kumaqonga 9 yaye 10. Xa bakhwela uloliwe, ahlangana Ron Weasley and Hermione Granger, abo bagcina abahlobo bakhe ubomi obude.
Kuyo yonke loo movie, uloliwe Hogwarts Express iyaqhubeka ukuze abonise uphawu ekuqaleni nasekupheleni konyaka ngamnye wesikolo kwaye inika ngelaphu kwezinye pretty imangalisayo bali-imigca. Ingakumbi elo xesha Harry kunye Ron Poswayo kuloliwe yaye iimpukane imoto ndisangqengqile esikolweni!
Qinisekisa ukuba download ubuncinane enye yezi Movies Featuring Uqeqesha wakho yefowuni okanye tablet ngaphambi kokuba incwadi olandelayo yakho uhambo.
IAmsterdam yaya eLondon ngoololiwe
Rotterdam ukuya eLondon ngoololiwe
I-Paris ukuya eLondon ngoololiwe
IBrussels ukuya eLondon ngoololiwe
I eDarjeeling Limited (2007)
Iposi ekwabelwana ngalo nguSinefil (@ city.of.cinema)
Quirky kanye inhliziyo, lo kukhetha of, Movies Featuring Uqeqesha, has zonke linophawu wayo umbhali-mlawuli, Wes Anderson. Emva kokuba utata wabo udibana ukufa ngengozi, Abazalwana abathathu Sihamba India ngololiwe ngelizama basondelelane.
Edlalwe yi Owen Wilson, uShrien Brody, Jason Schwartzman, umzalwana ngamnye oxinezelekileyo, kunye oluninzi ngokumluleka kunye nokulwa emihle. Kodwa ke, ukuba imovie Wes Anderson – kukho ilenze ezininzi ohlekisayo avule. Omnye wabazalwana ushiye eyakhe ndikhulelwe Umfazi ekhaya kwaye omnye wohlukene nentombi yakhe kwaye ufumana uthando nomnye wabalindi bakaloliwe.
Kukho kwakhona inyoka inobuhlungu, umngcwabo, njengentsebezo kanye ... kakuhle, asiyi kubanika na ngaphezulu kude. Vumela le nkcubeko yakudala ikukhuthaze ukuba uziodole ngokwakho train adventure.
ENuremberg ukuya eBerlin ngoololiwe
I-Aachen ukuya eBerlin ngoololiwe
Ukuhamba ukuya eBerlin ngoololiwe
Ukubulala kwi Orient Express (2017)
Iposi ekwabelwana ngalo nguSteve (@grushkov)
Ngokusekelwe odumileyo Agatha Christie inoveli, le remake yanamhlanje uba ongangokugibisela inkwenkwezi igcwele-kuquka Agen Dench, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, UJohnny Depp, kunye noWillem Dafoe. Kenneth Branagh indima ephambili ye Hercule Poirot, naye wayalela lo mboniso kwaye oku kuyinxalenye Movies yethu Featuring Uqeqesha.
Ngaphandle intshayelelo kunye ezithile engqondweni, lwendaba yonke omi phezu Luxury train. iibhodi Poirot i Orient Express ukuba ukuthatha ikhefu elide ifanelwe. Kwibar yokunethezeka yodidi lokuqala kunye imoto yokutyela, udibana neqela labakhweli elibonakala lingadibani. Omnye wabo uthi ubomi bakhe busemngciphekweni, kwaye uzama ekuqasheni Poirot – i nomcuphi kakhulu – ukuze agcine kuye ephephile.
uyala, bonke abakhweli uye kulala. Ngentsasa elandelayo, umkhweli ifunyanwa ebulewe. Ukwenza izinto ezinkulu kakhulu, i derails uloliwe snow. Poirot ke baqashwa ukusombulula ulwaphulo-mthetho phambi kokuba uloliwe sabuyel 'ekhondweni kwaye amapolisa bati lokubulala.
In a emihle wathi, dramatic mfihlelo thriller, ibali kwenzeka njengoko Poirot udliwano abakhweli ngalinye kwaye ufumana ukuba ngamnye kubo yimfihlelo kwaye hayi yonke into njengoko kubonakala.
Oku kufuneka-ukubona phakathi, Movies Featuring Uqeqesha, hayi nje kuphela ngenxa lwendaba brilliant and lokuqala-class emele kodwa ubuhle langa kunye neembono kaloliwe ngokwayo.
IBrussels ukuya eAmsterdam ngoololiwe
ILondon ukuya eAmsterdam ngoololiwe
I-Bonn eya e-Amsterdam ngoololiwe
I-Paris ukuya eAmsterdam ngoololiwe
Injini Little angasenza (2011)
Ukuba une izama kancinane ojikelezayo nawe, Ndizifumana sichulumancile ukuba uhambo lo mboniso kid-friendly. tale Abantwana odidi bufika kubomi movie ngokupheleleyo-ubude kunye ongangokugibisela star Sea-. Celebs sifake ziquka Jamie Lee Curtis and Whoopi Goldberg.
Imovie ilandela injini Little – nguloliwe zokudlala – yonke adventures wakhe weDreamland, njengoko oko lisebenzisana nabanye abalinganiswa kaloliwe kunye zokudlala. Kukho a ibali ukufana kwihlabathi ngokoqobo, apho ophambili yinkwenkwe encinane ebizwa ngokuba uRichard. kunjalo, abanobuqhetseba nezigwinta ezimbini zingqubane xa uRichard kuphelela ngaphakathi weDreamland. Ubukho bakhe kukhona kubangela iingxaki, so he needs to go back. Adventure and hijinks ensue while he and the toys try to get him back into the real world.
Yeyiphi indlela entle yokukhuthazwa ziiMovie ezibandakanya oololiwe ukuze bahambe ngoololiwe!
IBrussels ukuya eParis ngoololiwe
ILondon ukuya eParis ngoololiwe
IMarseille yaya eParis ngoololiwe
IAmsterdam yaya eParis ngoololiwe
Ukulungele ukubhala Movies zakho Featuring ibali ezinxulumene Uqeqesha? Visit www.saveatrain.com kwaye bafumane amatikiti etreyini engambi amazwe yakho olandelayo uloliwe.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-movies-featuring-trains%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / ru ukuba / es okanye / de kwiilwimi ezininzi.
#HarryPotter trainmovies tips uloliwe
Business ahambe ngetreyini, Ukuqeqesha ngezimali, Iingcebiso zokuhamba